Akhriso Akhriso Qoraal Kasta Hadii Aan ... | Martech Zone
Waad Akhrin Laheyd Qoraal Kasta Hadaan…
Arbacada, Janaayo 23, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maamulahaygu wuxuu kiraystay kheyraad waqti-dhiman ah si loo soo saaro nuqul suuq-geyn ah oo aan u baahanahay markii aan geynayno degelkeena cusub ee suuq-geynta. Qofka la shaqaaleeyay wuxuu leeyahay asal suuq geyn adag laakiin asal ahaan malaha suuq geynta webka - waxaan hubaa inay awood u yeelan doonaan inay si fudud ku soo qaataan (waan rajeynayaa sidaas!).
Si aan u bixiyo jiheyn, waxaan siiyay nuqul-qoraha xoogaa agabyo waaweyn ah oo ku saabsan qoritaanka waxyaabaha ku jira. Mid ka mid ah kheyraadka ayaa ah Junta42's Blog-yada Suuqgeynta Sare. Ma aanan hubin dhammaan baloogyada ku jira liistadaas laakiin waxay leedahay xoogaa kalsooni ah oo la siiyay markii aan helay CopyBlogger halkaas jooga! Waxaan si dhakhso leh u fahmi doonaa boggaga kale.
Talooyin ku saabsan qoritaanka nuqul ee boggaaga ama Bloggaaga:
Adigoon ku sii dheerayn, halkan waxaa ku yaal tilmaamaha ugu sarreeya ee qoraalka. Waa inaan kubilaabaa anigoo sheegaya inaan dambi kujiro kuwan oo aan ku isticmaalin dhamaan qoraaladayda. Waxaan rajeynayaa inaad qaban doontaan shaqo ka fiican tii aan qabtay. Adiga doono guuto abaalmarinta!
Cinwaanada xiisaha leh - xulashada cinwaannada aan u muuqan wargeys laakiin, halkii, ugu sarreysa akhristayaasha ay xiiseynayaan maaddaama ay ku boodayaan natiijooyinka mashiinka raadinta iyo soo afjaridda quudintooda RSS.
Tusmada Chunking - barta cad waa saaxiibkeen. Si aad nuqulkaaga uga dhigto mid la akhrin karo… ama hoos loo dhigi karo… ka fogow tuducyada aad ku baratay inaad ku qorto kulliyadda. Taabadalkeed, dooro cinwaan adag, ama cinwaan hoosaad, oo ay ku xigto cutubka 1 ama 2 weedho aad u adag. Ka faa'iideyso liisaska dhawaaqa ama tirada leh.
Isku xira si xushmad leh - gudaha ku xira maqaalladaada adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah ee kaxeyn doona taraafikada. Sidoo kale ku xir dibedda, adoo dhiirrigelinaya baloogyo kale oo dib kuu soo celin doona maalin uun. Tani waxay xoojineysaa tusmeynta mashiinka raadintaada, waxay kaa caawineysaa inaad ku sii hayso martida goobtaada waqti dheer, waxayna kobcisaa baloogyada kale - u bandhigida dhagaystayaashaada tiradooda iyo tan kale.
Adeegso ereyada muhiimka ah iyo ereyada muhiimka ah - fahamka waxa dadku raadinayaan ee shabakadda ayaa fure u ah fahamka sida bartaada looga heli doono makiinadaha wax lagu raadiyo. Adeegsiga ereyada muhiimka ah iyo jumladaha muhiimka ah inta aad ka kooban tahay oo dhan waxay kaa caawin doontaa kaxaynta waxyaabahaas ku jira matoorada raadinta waxayna dadka u keeni doontaa bartaada oo raadineysay waxaad soo dhiibtay.
Bog WALBA waa bog soo degitaan ah - Ganacsatada websaydhadu badanaa waxay ka hadlaan bogagga degitaanka oo si dabacsan ayaa loo aqoonsaday inay tahay meesha aad ka dalbanayso booqdaha emayl ama dallacsiin. Si kastaba ha noqotee, maaddaama boggagaaga ama boggagaaga ay ka kooban yihiin (rajo ahaan) si shaqsi ah loogu muujiyo makiinadaha raadinta, tani waxay ka dhigan tahay in bog kasta oo si gaar ah loo qoondeeyey uu noqonayo bog degitaan ah! Taasi waxay tiri, waxaa muhiim ah inaad ula dhaqanto bog kasta sidii akhristaha uusan waligiis u soo marin goobtaada kahor. Gaar ahaan baloog! In ka yar 10% ee booqdayaashayda cusub waxay ku soo galaan barteyda boggeyga.
Sanadkii hore waxaan qoray, Jooji Qorista Mashiinnada Goobidda. Waxay ahayd mowqif adag oo ka dhan ah qorista macluumaadkaaga kaliya soo jiidashada makiinadaha raadinta maxaa yeelay waxay damineysaa akhristayaasha. Waxaan ku taaganahay qoraalkaas; si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay inuu jiro isku dheelitirnaan markaad qorto waxyaabahaaga.
Haddii aad qori kartid waxyaabahaaga si ay akhristayaashu u heli karaan, ugu raaxaystaan, OO aad u hesho dareenka makiinadaha raadinta ee aad heshay dheelitirka saxda ah.
Tags: adxayaysiintaxayeysiiska calankaxikmadnaqshad sameyntagoogle webmastersqaabeynta boggahagaajinta boggadejinta shabakaddaqorshaynta bogga
Isku Xidhka Dhibcaha
Sidii aan ugu soo qoro Twitter-ka oo ay la socoto itter
Jan 27, 2008 saacadu markay ahayd 10:51 PM
Waad ku mahadsantahay tilmaamahaas,
Weligey xitaa tixgelin kama helin inaan u daaweeyo bog kasta sida inuu yahay bog guri.
Waxay macno samaynaysaa in qof kastaa uusan ka soo galin bogga guriga.